မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Lee Min Ho at Maldives
Ma Baydar...FYI.."Boys over flower " was shot in New Caledonia..not in maldives..Cheers
8/08/2010 8:56 AM
:)).. ကိုးရီးယားကားကို အဲလောက်မစွဲပေမယ့် မဗေဒါရေးတဲ့ လီမင်ဟိုကိုသွားနှုတ်ဆက်တဲ့ပို့စ်လေးကို သဘောကျမိတယ်.... အဲဒိဟာလေးကို အခြေပြုလို့ ကျွန်တော်ဇာတ်တစ်ပုဒ်လည်းရေးလိုက်မိတယ်.... မဗေဒါချစ်တဲ့ ကိုးရီးယားကားတွေကို အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း...
မဗေဒါ ညွန်းချင်တဲ့ ကိုးရီးယား ကားကောင်းလေးတွေ သိချင်ပါတယ်။ပြောပြမယ် မလား ?
ဟုတ်တယ်. ဗေဒါရေ.. ဒို့ဆို လီမင်ဟိုကို သဘောကျတဲ့အတွက် ကိုးရီးယားကားတွေ ကြိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီအကြောင်းတွေ ရေးတတ်လေ့ရှိတဲ့ ဗေဒါ့ရဲ့ ဘလော့ကို အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တိုင်း ဖွင့်ဖတ်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်..။ သိချင်တာလေးတွေ သိရတော့ ရေးတဲ့သူကို ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်.။ ဆက်လက်ပြီး အားပေးနေဦးမှာပါ. ဗေဒါ.....